निशा घिमिरेलाई हस्पिटल भित्रै बि,ष खुवाउने,भाइ बनेर सेक्युरिटी तो,डेर भित्र जानेको गो,प्य प्र,माण भेटियो (भिडियो हेर्नुस) - Mountain Media
निशा घिमिरेलाई हस्पिटल भित्रै बि,ष खुवाउने,भाइ बनेर सेक्युरिटी तो,डेर भित्र जानेको गो,प्य प्र,माण भेटियो (भिडियो हेर्नुस)
अभिनेत्री तथा मोडल निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा क्र,मिक रुपमा सु,धार हुँदै गएको निशाले संकेत दिन थालेको र आफूहरुले बोलेका कुरा बुझे जस्तो गरी अनुहार र आँखाको हाउभाउबाट प्रति,क्रिया समेत दिने गरेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । चिकित्सकले उनलाई ह्वी,लचेयरमा बसाउन समेत सुरु गरेका छन् ।
यद्यपी निशा सामान्य अवस्थामा फर्किने सम्भावना भने न्यू,न रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । सवारी दुर्घ,टनामा परेर तीन वर्षदेखि अ,र्धचेत अवस्थामा रहेकी उनको नर्भिक अस्पतालकी प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले जेठ २७ गते उ,द्धार गरेर उपचार सुरु गरेकी थिइन् । हाल नर्भिक अस्पतालले उनलाई वि,शेष उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिरहेको छ ।
उप,चार पाएको भोली पल्टै उनको मुहारमा खुसीको चमक देखिएको थियो । उप,चारपछि उनको शरीरका घा,उहरु निको हुन थालेको अस्पतालले जनाएको छ । तर केहि दिन अगाडी हस्पिटल भित्र एक अप,रिचित व्यक्ती निशाको भाइ नाता लगाएर छिरे ।
जव त्यहाँ नजिकका आफन्त नै जान गा,ह्रो छ , त्यो व्यक्तीले निशालाई जुश भनेर पि,ष खान दिएको खुलेको छ । त्यो को हो आज सम्म खुला सकेको छैन् ? यही बिषयमा पुन्य गौतमले आफ्नो बिचार राखेका छन हेरौ भिडियो
Previous: फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
Next: भारतमा कालो ढुसीको संक्रमणबाट ४३०० भन्दा बढीको मृत्यु